मानिस किन चाडै बुढो हुन्छ ? | YesKhabar
मानिस किन चाडै बुढो हुन्छ ?
२०७६ साल भाद्र ६ गते, शुक्रबार १२:४० PM
एकैछिन उमेरको हिसाब-किताब गरौ । हामी १० बर्षसम्म बालक रहन्छौं । १३ बर्षदेखि किशोरवयमा प्रवेश गर्छौ । किशोरवय जीवनकै स्वणिर्म उमेर मानिन्छ ।
यतिबेला न शरीरमा रोग हुन्छ, न भय । न कुनै जिम्मेवारी हुन्छ, न कुनै भार । भनिन्छ नि, यो उमेरमा आकाशमा उडिरहेको चरा पनि समात्ने जोश र उर्जा हुन्छ हामीसँग ।
१८ बर्ष नपुग्दै किशोरवय निथि्रन्छ । यतिबेलासम्म हामीलाई घर-परिवारको चिन्ताले सताउन थाल्छ । आफ्नै करियरको दबाव बढ्न थाल्छ । एकातिर भविष्य बनाउनुपर्ने, अर्कोतिर पारिवारिक जीवन सुरु गर्नुपर्ने दोहोरो चापमा पर्छौ ।
जब हामी युवावयमा प्रवेश गर्छौ, तब हामीमा केही परिपक्ता आउँछ । यतिबेला हामीसँग जोश हुन्छ । उर्जा हुन्छ । बल हुन्छ । त्यही कारण युवावयमा हामी जुन लक्ष्य तय गर्छौं, त्यहाँसम्म पुग्न हामीलाई केहीले छेक्न सक्दैन ।